Metal Keypad napetraka ao amin'ny Kios serivisy any Danemarka-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Milina Keypad napetraka ao amin'ny Kiosk serivisy any Danemark
Fotoana: 2020-06-05 Hits: 16
Ny indostrian'ny serasera XiangLong dia manolotra karazana kalitao avo lenta, tsy tantera-drano ary fanoherana kiosk keypads. Ny keypad rehetra dia vita amin'ny mateza Stainless vy or zinc alloy. Ny bokotra fitodihana, ny làlam-pandaharana sy ny lamina dia azo zahana araka ny takian'ny mpanjifa.
Raha mila fanazavana fanampiny, miangavy anao hanontany aminay!
Taloha: Torohevitra momba ny fampiasana telefaona finday sy finday
Next: Keypad vy vy tsy misy fangarony 4x4 napetraka ao amin'ny milina fivarotan'i Uniqlo